ကလေးများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်း » Today Bago
HomeLifestyleSex Educationကလေးများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်း ကလေးများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်း May 23, 20170comments Nandar Lwin Posted in Sex Education0ယခုမျက်မှောက်မှာ မိဘတွေအားလုံးက သူတို့ကလေးတွေရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံ မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တူညီတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဘယ်သူက ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်၊ ဘယ်သူက မယုံကြည်ရဘူးလဲ ဆိုတာကို ဘယ်လိုသင်ရမလဲ? ဘာကို သင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
မိဘတွေက မသေချာမရေရာတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ၊ ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းမလဲဆိုတာကို ကလေးတွေကို သင်ဖို့ လိုအပ်ပေမယ့် ကလေးတွေ သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်း သေချာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သားကောင်များရဲ့ အန္တရာယ်မှ သူတို့ကို ဘေးကင်းလုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့သည် ကလေးတွေကို သံသယရှိတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် စိတ်မချရတဲ့အလားအလာရှိသူများနှင့် အခြေအနေများကို အသိအမှတ်ပြု ကူညီဖို့ လိုအပ်ပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ စောင့်ရှောက်ဖို့ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိဘအများစုက သူတို့မသိတဲ့ အလွဲသုံးစားပြုနိုင်ချေရှိတဲ့သူများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်သော်လည်း သားကောင်အဖြစ်အများဆုံးက အကျွမ်းတ၀င်ရှိတဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါက ကလေးတွေကို လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နေထိုင်မှုအကြောင်း ပညာပေးတဲ့အခါမှာ ခြောက်လှန့်တဲ့နည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာ မဟုတ်သလို ထိရောက်မှုလည်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သားကောင်တွေကနေ ကလေးတွေ ဘေးကင်းလုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် အနည်းငယ် အကြံပေးချင်ပါတယ်။
၁။ သင့်ကလေးတွေ ပြောတာကို နားထောင်ပါ
သင့်ကလေးတွေကို မည်သည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ မည်သည့် ပြဿနာမဆို သင်တို့ဆီကိုလာနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါစေ။ သင်သူတို့နှင့် စကားပြောတဲ့အခါ ကလေးတွေအပေါ် သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို ထားပေးခြင်းနှင့် ကလေးတွေရဲ့ စကားကို နားထောင်တတ်ဖို့ လက်တွေ့ကျင့်သုံးပေးပါ။ သင့်ကလေးတွေအပေါ် အပြည့်အ၀အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် Phone Screen တွေကို ပိတ်ထား၊ ဖယ်ရှားထားပါ။
၂။ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို သင်ပေးပါ။
သင့်ကလေးတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ့် အခြေအနေတခုမှာ ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်အောင် ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို သင်ပေးပါ။ ကိုယ့်ကိုအဆင်မပြေအောင်၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်တာကြုံလာတဲ့အခါ လူကြီးတွေမို့လို့ဆိုပြီး သည်းခံပြီး နေစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ သူတို့မှာထွက်သွားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ သင်ပေးထားပါ။ သင်သည် သင့်ကလေးတွေကို အားပေးစကားပြောခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဖြေရှင်းနည်းများဖြင့် အဖြေရှာခြင်း၊ ပြဿနာများကို တဆင့်တွေးတောခြင်း၊ အတူတကွ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများကို ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့် ဒါကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၃။သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုများနှင့် သူတို့စိတ်ထဲက ယုံကြည်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ သင့်ကလေးတွေကို သင်ပေးပါ။
သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုအသိစိတ်က သူတို့ကို လုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက်ဖို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင့်ကလေးတွေကို နားလည်အောင် ကူညီပါ။ ဒါက တခုခုက လုံခြုံတယ် ဒါမှမဟုတ် မလုံခြုံလျှင် သူတို့ထဲမှာ ခံစားနေရတာကို ပြောပြခြင်းက အနည်းငယ်သော ထုတ်ဖော်မှုပါပဲ။ သူတို့ပင်ကိုယ်အသိစိတ်က တခါတရံမှာ မှားနိုင်တာကို သူတို့ကို သင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါက ပြောပြဖို့ သူတို့ကို ရှင်းပြပေးပါ။ သူတို့ပြောတာကိုလည်း အမြဲတမ်းနားထောင်ပေးသင့်ပါတယ်။ သူတို့ အမြဲတမ်း စိတ်အနှောက်အယှက် ဒါမှမဟုတ် ကြောက်လန့်ခြင်းကို ခံစားမိလျှင် တတ်နိုင်သမျှအဝေးကို ရှောင်သင့်ကြောင်းနှင့် ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လူကြီးကို ပြောပြသင့်ကြောင်း ရှင်းပြပါ။
၄။ သင့်ကလေးကို ဘယ်သူကစိတ်ချရသူ၊ ဘယ်သူက စိတ်မချရဘူးလဲဆိုတာကို နားလည်အောင် ကူညီပါ
သင့်ကလေးတွေကို လှည့်စားတတ်တဲ့သူတွေအကြောင်းကို ပြောပြပေးပါ။ လှည့်စားတတ်တဲ့သူတွေက နည်းအမျိုးမျိုး ပုံစံမျိုးစုံနှင့် အားနည်းချက်ရှိနေတဲ့ ကလေးရဲ့ ယုံကြည်ချက်ရအောင်ကြိုးစားပြီး သူတို့လိုချင်တာကို အခွင့်အရေးရအောင် ယူတတ်ကြပါတယ်။ လှည့်စားတတ်တဲ့သူတွေက ကလေးတွေရဲ့ အကူအညီကို ရရှိဖို့ကြိုးစားနိုင်ပြီး ဒါကို သင့်ကလေးတွေ အသိအမှတ်မပြုဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရွယ်ရောက်တဲ့ ကလေးတွေသည် သူတို့မသိတဲ့သူတွေရဲ့ အကူအညီတောင်းဆိုမှုဟာ လှည့်စားတတ်တဲ့သူရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တာကို နားလည်သဘောပေါက်ရပါမယ်။
၅။ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့လူများနဲ့ နေရာတို့ကို ဆန်းစစ်ပါ
သူတို့ပြဿနာ ရှိခဲ့လျှင် လုံခြုံတဲ့နေရာ ဘယ်နေရာကို သွားဖို့ ၊ အကူအညီတောင်းဖို့ ဘယ်သူက စိတ်ချရတဲ့သူ၊ ကစားဖို့ ဘယ်နေရာက လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာဆိုတာ ခွဲခြားသတ်မှတ်တတ်ဖို့ သင့်ကလေးတွေကို ကူညီပါ။ ကလေးတွေကို ကိုယ့်ကို လူတစ်ယောက်က လာရောက်ချဉ်းကပ်လာရင် ဘယ်လိုအပြုအမူတွေကို ရှောင်ရမယ်ဆိုတာကို သင်ကြားပေးသင့်ပါတယ်။ သင့်ကလေးတွေအတွက် စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ ယုံကြည်စ်ိတ်ချရတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက် ရှိသင့်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် မိခင်က ကလေးတွေကို အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေသင့်ပါတယ်။
ကလေးများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်း
ကလေးမြားကို ဘေးကငျးလုံခွုံစှာ ကာကှယျ စောငျ့ရှောကျခွငျး
ယခုမကျြမှောကျမှာ မိဘတှအေားလုံးက သူတို့ကလေးတှရေဲ့ ဘေးကငျးလုံခွုံမှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး တူညီတဲ့ စိုးရိမျပူပနျမှုမြားနှငျ့ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ဘယျသူက ယုံကွညျစိတျခရြတယျ၊ ဘယျသူက မယုံကွညျရဘူးလဲ ဆိုတာကို ဘယျလိုသငျရမလဲ? ဘာကို သငျပေးရမလဲဆိုတဲ့ ပွဿနာမြားကို ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။
မိဘတှကေ မသခြောမရရောတဲ့ အခွအေနတှေကေို ဘယျလိုခှဲခွားမလဲ၊ ဘယျလိုထိနျးကြောငျးမလဲဆိုတာကို ကလေးတှကေို သငျဖို့ လိုအပျပမေယျ့ ကလေးတှေ သှားရောကျလညျပတျတဲ့ သူငယျခငျြးရဲ့ပတျဝနျးကငျြက ဘေးကငျးလုံခွုံကွောငျး သခြောဖို့ လိုအပျပါတယျ။
သားကောငျမြားရဲ့ အန်တရာယျမှ သူတို့ကို ဘေးကငျးလုံခွုံအောငျ စောငျ့ရှောကျခွငျး
ကြှနျတျောတို့သညျ ကလေးတှကေို သံသယရှိတဲ့သူ ဒါမှမဟုတျ စိတျမခရြတဲ့အလားအလာရှိသူမြားနှငျ့ အခွအေနမြေားကို အသိအမှတျပွု ကူညီဖို့ လိုအပျပွီး သူတို့ကိုယျသူတို့ စောငျ့ရှောကျဖို့ အသိပညာနှငျ့ ကြှမျးကငျြမှုပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ မိဘအမြားစုက သူတို့မသိတဲ့ အလှဲသုံးစားပွုနိုငျခရြှေိတဲ့သူမြားနှငျ့ ပတျသတျပွီး စိုးရိမျပူပနျသျောလညျး သားကောငျအဖွဈအမြားဆုံးက အကြှမျးတဝငျရှိတဲ့သူမြားဖွဈကွပါတယျ။ ဒါက ကလေးတှကေို လုံခွုံစိတျခရြတဲ့ နထေိုငျမှုအကွောငျး ပညာပေးတဲ့အခါမှာ ခွောကျလှနျ့တဲ့နညျးဗြူဟာကို အသုံးပွုဖို့အတှကျ အထောကျအကူဖွဈစမှော မဟုတျသလို ထိရောကျမှုလညျးမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သားကောငျတှကေနေ ကလေးတှေ ဘေးကငျးလုံခွုံအောငျ စောငျ့ရှောကျဖို့အတှကျ အနညျးငယျ အကွံပေးခငျြပါတယျ။
၁။ သငျ့ကလေးတှေ ပွောတာကို နားထောငျပါ
သငျ့ကလေးတှကေို မညျသညျ့ စိုးရိမျပူပနျမှု၊ မညျသညျ့ ပွဿနာမဆို သငျတို့ဆီကိုလာနိုငျတယျဆိုတာ သိပါစေ။ သငျသူတို့နှငျ့ စကားပွောတဲ့အခါ ကလေးတှအေပျေါ သငျ့ရဲ့အာရုံစူးစိုကျမှုကို ထားပေးခွငျးနှငျ့ ကလေးတှရေဲ့ စကားကို နားထောငျတတျဖို့ လကျတှကေ့ငျြ့သုံးပေးပါ။ သငျ့ကလေးတှအေပျေါ အပွညျ့အဝအာရုံစိုကျနျိုငျစှမျးကို အနှောကျအယှကျဖွဈစမေယျ့ Phone Screen တှကေို ပိတျထား၊ ဖယျရှားထားပါ။
၂။ ပွဿနာဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ စှမျးရညျကို သငျပေးပါ။
သငျ့ကလေးတှကေို ကွိုတငျကာကှယျရမယျ့ အခွအေနတေခုမှာ ကောငျးတဲ့ရှေးခယျြမှု ပွုလုပျနိုငျအောငျ ပွဿနာဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ စှမျးရညျကို သငျပေးပါ။ ကိုယျ့ကိုအဆငျမပွအေောငျ၊ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈအောငျ လုပျတာကွုံလာတဲ့အခါ လူကွီးတှမေို့လို့ဆိုပွီး သညျးခံပွီး နစေရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကွောငျးနဲ့ သူတို့မှာထှကျသှားခှငျ့ရှိတယျဆိုတာ သငျပေးထားပါ။ သငျသညျ သငျ့ကလေးတှကေို အားပေးစကားပွောခွငျး တို့ကို ပွုလုပျပေးပါ။ ဖွရှေငျးနညျးမြားဖွငျ့ အဖွရှောခွငျး၊ ပွဿနာမြားကို တဆငျ့တှေးတောခွငျး၊ အတူတကှ အေးဆေးတညျငွိမျစှာ နစေ့ဉျစိနျချေါမှုမြားကို ခဉျြးကပျခွငျးဖွငျ့ ဒါကို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
၃။သူတို့ရဲ့ စိတျခံစားမှုမြားနှငျ့ သူတို့စိတျထဲက ယုံကွညျမှုမြားကို အသိအမှတျပွုဖို့ သငျ့ကလေးတှကေို သငျပေးပါ။
သူတို့ရဲ့ ပငျကိုအသိစိတျက သူတို့ကို လုံခွုံအောငျ စောငျ့ရှောကျဖို့ ဖွဈတယျဆိုတာ သငျ့ကလေးတှကေို နားလညျအောငျ ကူညီပါ။ ဒါက တခုခုက လုံခွုံတယျ ဒါမှမဟုတျ မလုံခွုံလြှငျ သူတို့ထဲမှာ ခံစားနရေတာကို ပွောပွခွငျးက အနညျးငယျသော ထုတျဖျောမှုပါပဲ။ သူတို့ပငျကိုယျအသိစိတျက တခါတရံမှာ မှားနိုငျတာကို သူတို့ကို သငျပွောပွနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကို အန်တရာယျရှိနျိုငျတဲ့ မလုံခွုံတဲ့အခွအေနဖွေဈပါက ပွောပွဖို့ သူတို့ကို ရှငျးပွပေးပါ။ သူတို့ပွောတာကိုလညျး အမွဲတမျးနားထောငျပေးသငျ့ပါတယျ။ သူတို့ အမွဲတမျး စိတျအနှောကျအယှကျ ဒါမှမဟုတျ ကွောကျလနျ့ခွငျးကို ခံစားမိလြှငျ တတျနိုငျသမြှအဝေးကို ရှောငျသငျ့ကွောငျးနှငျ့ ဘာဖွဈခဲ့တယျဆိုတာကို ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ လူကွီးကို ပွောပွသငျ့ကွောငျး ရှငျးပွပါ။
၄။ သငျ့ကလေးကို ဘယျသူကစိတျခရြသူ၊ ဘယျသူက စိတျမခရြဘူးလဲဆိုတာကို နားလညျအောငျ ကူညီပါ
သငျ့ကလေးတှကေို လှညျ့စားတတျတဲ့သူတှအေကွောငျးကို ပွောပွပေးပါ။ လှညျ့စားတတျတဲ့သူတှကေ နညျးအမြိုးမြိုး ပုံစံမြိုးစုံနှငျ့ အားနညျးခကျြရှိနတေဲ့ ကလေးရဲ့ ယုံကွညျခကျြရအောငျကွိုးစားပွီး သူတို့လိုခငျြတာကို အခှငျ့အရေးရအောငျ ယူတတျကွပါတယျ။ လှညျ့စားတတျတဲ့သူတှကေ ကလေးတှရေဲ့ အကူအညီကို ရရှိဖို့ကွိုးစားနိုငျပွီး ဒါကို သငျ့ကလေးတှေ အသိအမှတျမပွုဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အရှယျရောကျတဲ့ ကလေးတှသေညျ သူတို့မသိတဲ့သူတှရေဲ့ အကူအညီတောငျးဆိုမှုဟာ လှညျ့စားတတျတဲ့သူရဲ့ လက်ခဏာဖွဈနိုငျတာကို နားလညျသဘောပေါကျရပါမယျ။
၅။ လုံခွုံစိတျခရြတဲ့လူမြားနဲ့ နရောတို့ကို ဆနျးစဈပါ
သူတို့ပွဿနာ ရှိခဲ့လြှငျ လုံခွုံတဲ့နရော ဘယျနရောကို သှားဖို့ ၊ အကူအညီတောငျးဖို့ ဘယျသူက စိတျခရြတဲ့သူ၊ ကစားဖို့ ဘယျနရောက လုံခွုံစိတျခရြတဲ့နရောဆိုတာ ခှဲခွားသတျမှတျတတျဖို့ သငျ့ကလေးတှကေို ကူညီပါ။ ကလေးတှကေို ကိုယျ့ကို လူတဈယောကျက လာရောကျခဉျြးကပျလာရငျ ဘယျလိုအပွုအမူတှကေို ရှောငျရမယျဆိုတာကို သငျကွားပေးသငျ့ပါတယျ။ သငျ့ကလေးတှအေတှကျ စောငျ့ကွညျ့ပေးဖို့ ယုံကွညျဈိတျခရြတဲ့ လူကွီးတဈယောကျ ရှိသငျ့ပါတယျ။
ဒါမှမဟုတျ မိခငျက ကလေးတှကေို အမွဲတမျးစောငျ့ကွညျ့နသေငျ့ပါတယျ။
Related Posts0comments Sex Education Sex Doll အရုပ်များလူကဲ့သို့စကားအပြန်အလှန်ပြောနိုင်တေ့ာမည်
0 comments Sex Education ကိုယ့်ကလေးကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဘာမှမဖြစ်ခင်မှာ အချိန်မှီဘယ်လိုတားဆီးမလဲ
0 comments Health & BeautyRelationshipSex Education လိင်ဘဝပိုမိုကောင်းမွန်းဖို့(သို့)အချစ်တွေတိုးပွားဖို့ဘယ်လိုအစားအစာတွေစားပေးသင့်လည်း
တစ်နာရီကို ၃၇မိုင် မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ အရွယ်အစားသေး...	May 22, 2017	0 comments နောက် ၁၃ နှစ်မှာ ဒူဘိုင်းရဲတွေရဲ့ တာဝန်ယူမှု လေးပုံ...	May 23, 2017	0 comments Share this 5SHARESFacebookTwitterGooglePinterestRedditTumblr
Do not miss0comments Sex Education Sex Doll အရုပ်များလူကဲ့သို့စကားအပြန်အလှန်ပြောနိုင်တေ့ာမည်